MICEG Non-Profit Organization | MICEG
MICEG သို့မဟုတ် Non-Profit Organization
၁။ ၂၆.၄.၂၀၁၄ တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းများကို စတင် လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော MICEG သည် နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (QC) ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော လုပ်ငန်း ၃၁-ခုနှင့်၊ ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှအပ်နှံသော အင်ဂျင်နီယာအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း ၁၄-ခု၊ စုစုပေါင်း လုပ်ငန်း ၄၅-ခု ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ၊ လုပ်ငန်းတန်ဘိုးစုစုပေါင်းကျပ်သန်း ၂၂၈၁၈ အတွက် လုပ်ငန်းအရည်အသွေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ MICEG အဖွဲ့ခွဲများဖြစ်ကြသည့် နေပြည်တော်၊ မကွေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပဲခူး၊ ကယား၊ ပြည်၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ပုသိမ်၊ မုံရွာ၊ မန္တလေး စသည့်အဖွဲ့ခွဲများသည်လည်း QC စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဒေသအလိုက်အသီးသီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြရာ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စုစုပေါင်းလုပ်ငန်း ၇၉၁ ခု၊ တန်ဘိုးကျပ်သန်း ၈၃၂၆၅ အတွက် လုပ်ငန်းအရည်အသွေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာလည်း ပြင်ပမှအပ်နှံသည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က QC စစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်း ၅၈၁ ခု၊ တန်ဘိုးကျပ်သန်း ၅၀၄၁၅ အတွက် အရည်အသွေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ၁၃၂ ခု ချုပ်ဆိုကာ အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းကို MICEG ကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ MICEG အဖွဲ့ခွဲများကလည်း ဒေသအလိုက် အသီးသီး QC စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြပါတယ်။
၃။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပိုမိုပွင့်လင်းလာသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထူးသဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ မြန်မာပြည်သူလူထုသည် အရည်အသွေးပိုင်း အားနည်းချက်များကိုခံစားနေခဲ့ကြရသည်ဖြစ်ရာ၊ အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အထူးလိုအပ် လျက်ရှိနေပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် (Federation of Myanmar Engineering Societies) ၏ ထိုစဉ်က ဥက္ကဌဦးဝင်းခိုင် (ယခုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်)နှင့် တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင် ၃၀-ဦးတို့က ဤအဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်၏ထီးရိပ်အောက်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ဤအဖွဲ့ဟာ အကျိုးအမြတ်ရရှိရေးကိုရည်ရွယ်ချက်မထားဘဲ၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် တတတ်တအားပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဲခြင်းဖြစ် ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ MICEG ရဲ့ အဓိကတာဝန်သည် ပြည်သူလူထုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အင်ဂျင်နီယာကျင့်ဝတ် များနဲ့အညီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် MICEG ကို ပြည်သူတို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိသာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများကိုသော်လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာပညာ ကိုသော်လည်းကောင်း၊ လေးစားခြင်း တန်ဘိုးထားခြင်းမရှိခဲ့သောကာအပိုင်းအခြားတစ်ခုတွင် အရည်အသွေး နိမ့်ကျသွားခဲ့သော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ အရည်အသွေး ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်မှန်းထားပါတယ်။
၅။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၃၀-ဦးဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော MICEG ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၅၄-ဦး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၃၃၈-ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၈၇၇-ဦး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁၁၇၇-ဦးထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၁၁၇၇-ဦးတွင် Professional Engineer (PE) ၁၅၂-ဦး၊ RSE ၃၉၈-ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၃၅-ဦး ဟာ သက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂၅-နှစ်ကျော်ရှိသော Professional Engineer (PE) များဖြစ်ကြပြီး၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ၂-နှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၃၅-ဦးထဲမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ၂၁-ဦးကိုလည်းကောင်း၊ အဆိုပါ ၂၁-ဦးထဲမှ ဥက္ကဌ ၁-ဦး၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ၂-ဦး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁-ဦး၊ တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ၂-ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ၁-ဦး၊ တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး ၁-ဦး၊ ပြန်ကြာရေးမှူး ၁-ဦး၊ တွဲဖက်ပြန်ကြားရေးမှူး ၁-ဦး၊ အကျိုးဆောင်စာရင်းစစ် ၁-ဦး၊ တွဲဖက်အကျိုးဆောင်စာရင်းစစ် ၁-ဦး စုစုပေါင်း ၁၂-ဦးကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၇။ ၁၀.၆.၂၀၁၇ နေ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နေပြည်တော် စုဝေးခန်းမတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးတို့က မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်(Fed.MES)နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့(MICEG)မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် များ၊ Fed.MES နှင့် MICEG အဖွဲ့ခွဲ့များမှအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ၌ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအားတတိယအဖွဲ့အစည်းမှစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ စာအုပ် ၈-မျိုး၏ Soft Copy များကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ် –
1. MOC Standard 2. Inspector’s Manual 3. Presidency (1.2017) 4. Field Engineer’s Manual 5. Myanmar National Building Code (2016) 6. Third Party Inspection Program (TPIP) Guideline 7. Construction Management Guideline (CMAK) 8. Code of Ethics
၈။ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအဌမနေ့ (၁.၁၁.၂၀၁၇) တွေင် ဂန့်ဂေါမဲဆန္ဒ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ယဉ်မင်းလှိုင်မှတင်သွင်းသည့် “နိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိ တည်ဆောက် ရေး လုပ်ငန်းများအား Third Party စနစ်ကို မှန်ကန်စွာကျင့်သုံး၍ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို(၁၄.၁၁.၂၀၁၇)နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
၉။ သို့ပါ၍ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ဟာ Third Party (QC) စစ်ဆေး ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရာ၌ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖြန့်ဝေးပေးလိုက်သော အထက်ဖေါ်ပြပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာ၍ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၁၀။ အစိုးရကတာဝန်ပေးသော လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများမှ အပ်နှံသောလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း အထက်ဖေါ်ပြပါ ၁၂-ဦးပါဝင်သော အမှုဆောင်အရာရှိများအဖွဲ့ (Office Bearer) အဖွဲ့က အပါတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူနေ့တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ကာ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
၁၁။ ဖေါ်ပြပါ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအဖွဲ့ (Project Implementation Group-PIG) တွင် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် PE (Construction), RSE (Construction) နှင့် လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ) တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းအတွက် PE (Electrical), RSE (Electrical) နှင့် လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(လျှပ်စစ်) တို့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် PE(IMPM), RSE (IMPM) နှင့် လက်ထောက် အင်ဂျင်နီယာ(စက်မှု) တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၁၂။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအဖွဲ့များတွင်ပါဝင်သောအင်ဂျင်နီယာများအား သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ချီးမြှင့်ငွေကိုခံစားခွင့်ပြုပြီး၊ ကျန်ငွေကို ရုံးဝန်ထမ်းလစာနှင့် ရုံးအသုံးစရိတ်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေသို့ထည့်ဝင်ငွေ အဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြု၍ ကျန်ငွေများကို အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းမပြုဘဲ အသင်းရံပုံငွေအဖြစ်စုဆောင်ထားရှိကာ ရေရှည် အသင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်အောက်၌ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၆၀ ကျော်ပါဝင်လျက်ရှိရာ၊ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ (Myanmar International Consulting Engineers Group – MICEG) ဟာ အဆိုပါအဖွဲ့ပေါင်း ၆၀ ကျော် ထဲမှ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ MICEG သည် အောက်ဖေါ်ပြပါ ဗိသုကာနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း နယ်ပယ် ၂၉ ခုကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည် –
1. Architecture Design, 2. Structure Design, 3. Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) Design, 4. Construction Project Management, 5. Third Party QA/QC, 6. Industrial Operation Assessment, 7. Construction Project Management, 8. Soil Test & Geotechnical Service, 9. Land Survey, 10. Metrology & Strength of Material Lab, 11. Construction Material Lab, 12. Heritage Impact Assessment, 13. Environmental Impact Assessment, 14. Social Impact Assessment, 15. Water Resources Irrigation, 16. Water Supply System, 17. Water and Waste Water Treatment, 18. Traffic and Transportation, 19. Urban Planning and Design, 20. Road & Bridge, 21. Automobile Industrial Development Consultation, 22. Marine Engineering Industry Development Consultation, 23. Tunneling and Underground Consultation, 24. Mineral Exploration, Mineral Resources Development and Mining Industry, 25. Oil & Gas Industry, 26. Chemical Industry, 27. Food, Pharmaceutical and Biotechnology, 28. Textile Industry, 29. Other Engineering Related Services
၁၄။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် MICEG ဟာ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်တွင်တည်ဆောက်နေသည့် ၈-ထပ် အဆောက်အဦ National Skill Training, Stimulation and Research Centre တွင် Soil Test, Architectural Design, Structural Design, MEP Design, Tendering Documentation, Project Management, and Quality Control စသည့်လုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းကာလ ၂ နှစ် ၆ လ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
၁၅။ ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Kajima Yankin PPP Redevelopment Project တွင် ပါဝင်တဲ့ 22 Storeyed Hotel, 29 Storeyed Long Stay Hotel, 21 Storeyed Office Tower,3Storeyed Retail တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် MICEG က Environmental & Social Impact Assessment (ESIA), Traffic Impact Assessment Service, Fire Safety Design Consultancy Services, Structural Design Consultancy Services, Geotechnical Design Consultancy Services, Electrical Design Consultancy Services, Water and Sanitation Design Consultancy Services, Air Conditioning, Mechanical Ventilation Design Consultancy Services စသည်တို့ကိုလည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်ဟာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် အဖွဲ့ခွဲများဖွဲ့စည်းထားရှိ သည့်နည်းတူ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ (MICEG) ကလည်း နေပြည်တော်၊ မကွေး၊ လွိုင်ကော်၊ မန္တလေး၊ ကျိုင်းတုံ၊ မြစ်ကြီးနား၊ မုံရွာ၊ တောင်ကြီး၊ စစ်တွေ၊ ပြည်၊ ပဲခူး၊ ပုသိမ်၊ တာချီလိတ်၊ လားရှိုး၊ ကလော၊ တောင်ငူ၊ ထားဝယ်၊ မြိတ် စသည့်မြို့များ၌ အဖွဲ့ခွဲပေါင်း ၁၉-ခုကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင်ရှိသော အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ခွဲများတွင်လည်း အလုပ်အမှုဆေင်ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။
၁၇။ အထက်ဖေါ်ပြပါ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါင်း ၃၀ ခန့်ကို MICEG ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော်လည်း လောလောဆယ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်တဲ့ QC စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ကို အဓိကထား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ တာဝန်လည်း အလွန်ကြီးမားလှပါတယ်။
၁၈။ MICEG သည် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စဉ်ကတည်းက နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် တတတ်တအား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဟူသောရည်မှန်းချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အစိုးရတာဝန်ပေးချက်အရ QC စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်ရာ၊ ကုမ္ပဏီများနည်းတူ စစ်ဆေးခအဖြစ် လုပ်ငန်းတန်ဘိုး၏ ၂ % ကို ရရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင် MICEG သည် QC စစ်ဆေးခ ၂ % တန်ဘိုးကို မျှော်ကိုး၍၊ မက်မော၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် တတတ်တအားပါဝင် ဆောင်ရွက်နေ ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများကို အလေးအနက်ထား တင်ပြလိုပါတယ်။
၁၉။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီများ ကို ယှဉ်ပြိုင်စေပြီးမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းအရည်အသွေး QC စစ်ဆေးမည့်ဖွဲ့အစည်း များကိုတော့ အခြေခံမူများချမှတ်၍ မျှတစွာတာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တည်ဆောက်ရေး ကုမ္ပဏီများမှာ Selected ဖြစ်ကြပြီး၊ QC အဖွဲ့အစည်းများမှာ Appointed ဖြစ်ကြပါတယ်။ QC အဖွဲ့အစည်း များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို အစီရင်ခံစာတင်ပြရ တာဝန်ခံကြရပါတယ်။
၂၀။ ၁၀ စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုမရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မိမိတို့သဘော ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်အလေ့အထသည် မြန်မာကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရဌနများ အဖွဲ့အစည်းများ တွင် အမြစ်တွယ်လျက်ရှိရာ၊ QC စစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများကို အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ရှိလာပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးထားသူများ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ပြည်သူများက နားမယောင်ကြရန် အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ငန်းအရည်အသွေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းကို မည်သည့်ကုမ္ပဏီကမှ ကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိထားမှသာလျှင် ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ လုပ်ငန်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုနဲ့ အန္တယ်ကင်းရှင်းမှုတို့ကို ခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၁။ အချို့အရည်အချင်းပြည်ဝသောကုမ္ပဏီများကတော့ အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းကို ကြိုဆိုကြ ပါတယ်။ သူတို့အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဘို့ ကြည့်ရှုတည့်မတ်ပေးတာ ဖြစ်လို့ ကျေးဇူးတင်တတ်ကြပါတယ်။ အပြန်အလှန် လေ့လာသင်ယူမှုပြုကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်တဲ့ အလွဲအမှားတွေကို ထောက်ပြ ပြုပြင် တည့်မတ်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်စွာ လိုက်နာပြုပြင် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ရလာဘ်ကောင်းများပေါ်ထွက်လာတာကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်ခံစားကြရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၂။ Conflict of Interest (COI) လို့ပြောနေကြတဲ့ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခကိစ္စရပ်များလည်း ရှိတတ်ပါ တယ်။ ကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီက QC အဖွဲ့ဝင်အချို့ကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းခံရတာမျိုး ရှားရှားပါးပါး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် အလွန်ရှားပါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ QC စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေဟာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများသူ ရင့်ကျက်သူတွေ အငြိမ်းစား အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းကြီးတွေက ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ကြပြီး၊ ဒီလုပ်ငန်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (Volunteer Basis) နဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်လို့ပါဘဲ။ မိမိတို့တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများလစာရိက္ခာပေးနိုင်ရေးကို စဉ်းစားကြရသော်လည်း ချမ်းသာ နိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ QC အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့် ဒီလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတိုင်းက သိနားလည်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၂၃။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပကတိအခြေအနေအရ QC လုပ်ငန်းဆိုတဲ့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအရည်အသွေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို စင်္ကပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားစသည့်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ဥပဒေများပြပဌာန်း၍ ဥပဒေနှင့်ထိန်းကျောင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း၊ လုပ်သင့်လုပ်အပ်သည့် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို သိရှိ နားလည်သော အမျှော်အမြင်ရှိသည့် အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များက မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ပကတိအခြေနေများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲပြုစု၍ လွှတ်တော်သို့တင်ပြကာ၊ လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူ သိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၂၄။ ထိန်းကျောင်းကွပ်ကဲမှုလျော့နည်းစွာ တနည်းအားဖြင့် ထိန်ကျောင်းကွပ်ကဲမှုကင်းမဲ့စွာ ဖြစ်နေခဲ့သော နိုင်ငံပိုင်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများကို ယခုအခါ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်သိရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီအချို့နဲ့ QC အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမရှိမှုနဲ့ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်မှု ပြဿနာတွေကြောင့် QC လုပ်ငန်းစဉ် အပေါ် ဝေဖန်မှုများရှိနေသော်လည်း QC လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းကြုံးပြီး ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမျိုး မပြုလုပ်မိကြပါရန် အထူးသတိပြုဘို့လိုပါတယ်။ QC လုပ်ငန်းစဉ်မှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လွဲမှားနေသလား၊ QC လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သူတွေ လွဲမှားနေသလားဆိုတာကို စနစ်တကျလေ့လာထောက်ပြပြီး တည့်မတ်အောင် ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်း ပေးမှသာလျှင် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာ အမြန်ဆုံး၊ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး၊ ဘေးအန္တယ်ကင်းရှင်းဆုံးနဲ့ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်
အောင်ဆန်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး MICEG (6.9.2019)
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့မှ အရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးပေးခဲ့သော တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
ဆေးတက္ကသိုလ်-၁(ရန်ကုန်)၊ ကျွမ်းကျင်မှုသင်ကြားရေး၊ ပုံစံတူလေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဌာန ၈-ထပ် အဆောက်အဦး တည် ဆောက်ခြင်းအား အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း
မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုံ၊ Prime Metal သံမဏိစက်ရုံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိမှုစွမ်းရည်အားစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်း
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပ္ပံ(အင်းစိန်) ပင်မဆောင်၊ သုံးထပ်မှန်ဆောင်နှင့် အထွေထွေအကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း